Oromiyarra darbee naannolee ollaa barsiisaa kan jiru; Yunvarsiitii Naannoo Oromiyaa – Ethipian Press Agency
Oromiyarra darbee naannolee ollaa barsiisaa kan jiru; Yunvarsiitii Naannoo Oromiyaa
Baatuu: Dandeettii raawwachiisummaa hojjattootaafi gaggeessitoota naannoo Oromiyaa cimsuuf yaadamee kan hundeeffame Kolloojjiin Paablik Saarviisii Oromiyaa kaleessaafi Yunvarsiitiin Naannoo Oromiyaa har’aa erga hundaa’ee kaasee hanga maatti barattoota kuma 52 ol ta’an barsiisee eebbisiisuu ragaan ni ibsa.
Bara 2009 irraa eegalee immoo sadarkaa yunvarsiitiitti kan ol guddate dhaabbatichi, uwwisasaas bal’isuudhaan tanaan dura barnoota barattoota naannoo Oromiyaa qofaaf kennaa ture gara naannollee ollaatti babal’isuun barattoota fudhatee barsiisuu eegaleera.
Yunvarsiitii Naannoo Oromiyaatti carraa barumsaa argachuusaatiin Oromoon hammataa ta’uu qabatamaan kan hubate ta’uu kan himu Naannoo Gaambeellaarraa kan dhufe Dop Gachi, ummanni Oromoo magaalaa Baatuus jaalalaafi kabaja olaanaan kan isaan keessummeesse ta’uu dubbata.
“Ilaalchi ani gaafa biyya jiru Oromoorratti qabuufi amma immoo gaafa isaan keessa jiraadhee argeen booda horadhe tasumaa waan walarguu miti” kan jedhu Dop, Yunvarsitiin Naannoo Oromiyaa carraa barnootaa qofa osoo hintaane carraa ummata gaarii kana ittiin baruu isaaf kennuusaatti galata dachaa kan qabuuf ta’uu ibsa.
Yeroo ammaa barattootni Gaambeellaarraa carraa barnootaa argatanii achitti barachaa jiran hundi akka nama qe’eessaatti barachaa jiruutti rakkoo tokko malee barumsasaanii sirnaan hordofaanii sirna eebbaatiif gahuus ni hima.
Yeroo ammaa dhaabbileen Oromoo lama ta’an hammattummaa Oromoo hawaasa isa birootiif qabatamatti ibsaa jiraachuu kan himan immoo walitti qabaa Boordii Yuunversiiticha Doktar Biqilaa Hurrisaa, isaanis OBNfi Yunvarsiitii Naannoo Oromiyaa ta’uu dubbatu.
OBN afaanota biyyattii kudhanii ol ta’an tamsaasuun, Yuunversiitiin naannoo Oromiyaa immoo barattoota naannichaan ala jiraniif carraa barnootaa kennuun duudhaalee hammattummaafi waan qaban waliif hiruu Oromoo hojirra oolchaa jiraachuu ibsaniiru.
Yunvarsiitichi bara barnoota 2014 irraa eegalee barumsa digrii 3fa ykn ‘PhD’ kan eegalu ta’uu kan himan immoo Pirezidaantiin Yunvarsiitichaa Doktar Gammachuu Araarsaa, tajaajilli barnootaa kanaan dura barattoota Oromiyaa qofaaf tures yeroo ammaa naannolee lamaaf; Sumaaleefi Gaambeellaaf kennamaa kan jiru ta’uusaafi gara fuula duraatti immoo gara naannolee biroottis kan babal’atu ta’uu mirkaneessaniiru.
Yunvarsiitiin Naannoo Oromiyaa barattoota 3,490 kanneen sagantaalee adda addaatiin Sanbata darbe sirn ho’aadhaan bakka eebbisiisuunsaa ni yaadatama.